केही होमियोप्याथी ब्यबहार गर्न कोरोनाभाइरस रोग (कोविड १)) को विरूद्ध प्रतिरोधात्मक उपायहरूको ख्याल राख्नु पर्दछ, यहाँ सबैलाई सुरक्षित राख्नका लागि थप सल्लाहहरू छन्!
जान्जन विश्वविद्यालयको मेडिकल साइन्स संकायका चिनियाँ अनुसन्धानकर्ता जिओ शेन्मे मिन्जीले छिट्टै वा पछि कोरोनाभाइरस रोग (कोविड १९)) अझ धेरै देशहरूमा आइपुग्ने सल्लाह दिए। ती मध्ये धेरै डायग्नोस्टिक किट वा उपकरणको अभाव छ।
दुर्भाग्यवस, कोरोनाभाइरस (सार्स कोविड १) सँग आज सम्म कुनै खास खोप वा उपचारहरू छैन किनकि आनुवंशिक उत्परिवर्तनले यसलाई अत्यन्त खतरनाक बनायो। यो सर्प र ब्याटमा जीन फ्यूजनका कारणले देखा पर्दछ र मानव सहित स्तनपायी जन्तुहरूलाई संक्रमित गर्ने क्षमता प्राप्त गर्दछ। तर मिन्जीले टिप्पणी गरे कि यो छुटकारा पाउनको लागि एक साधारण भाईरस हो। उनले मानिसहरूलाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबूत बनाउन सकेसम्म धेरै प्राकृतिक भिटामिन सी प्रयोग गर्न सल्लाह दिए।
यसै आधारमा, बेइजि military सैन्य अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रोफेसर चेन होरिन भन्छन् कि एक कप तातो पानीमा निम्बूको टुक्राले तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ।
तातो निम्बूले हाम्रो शरीरमा यो भाइरसको प्रसारलाई मार्न सक्छ! निम्बू तीन भागमा काटिन्छ र कपमा राखिन्छ। तातो पानी खन्याईन्छ र यो क्षारीय पानीमा परिणत हुन्छ।
प्रत्येक दिन यो पानीको सेवन गर्नाले निश्चय पनि यस भाइरसको प्रकोपको विरूद्ध मद्दत गर्दछ। गरम लेमनले औषधी जत्तिकै फाइदाजनक प्रभाव पार्न सक्छ। निकासीको साथ उपचारले भाइरसलाई नष्ट गर्दछ र फ्लूको उपचार गर्दछ।
थप रूपमा, निम्बूको रसमा एसिड र कार्बोक्सिलिक एसिडले उच्च रक्तचाप नियन्त्रित गर्न, साँघुरो धमनीहरूको रक्षा गर्न र रगत जम्मा गर्न घटाउन सक्छ।